भोलिको तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल [ २०७४ चैत्र १ गते ] | बिगुल न्यूज
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) भोलि तपाईको दिन मनोरन्जन केन्द्रित रहने देखिन्छ भने भोलि तपाईको परिवारको खुशीको लागि एस्समय साथ अर्थ खर्च हुने देखिन्छ। भोलिको दिनमा तपाईलाई मित्रहरूबाट उपहार पनि मिल्न सक्ला। नयाँ मित्रताको कारण भविष्यमा लाभ मिल्ने देखिन्छ। भोलिको दिन तपाईको वैदेशिक यात्राको लागि राम्रो रहेको छ। साथै भोलि अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ला।
बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) भोलिको दिन जागिरेहरुको लागि शुभ रहने देखिन्छ। भोलि तपाईको कार्यालयमा तपाईको सम्मान बढेर जाने देखिन्छ भने भोलि तपाईको पदोन्नतिको पनि योग रहेको छ। भोलि तपाईको अपूर्ण कार्य सम्पन्न हुन सक्ला। भोलि व्यवसायको क्षत्रमा पनि तपाईलाई लाभ मिल्न सक्ला। परिवारसँग धार्मिक यात्रा समेत रहन सक्ने देखिन्छ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) भोलिको दिनमा सकेसम्म कुनै पनि प्रकारको नयाँ कार्य थालनी नगरेकै उचित रहने देखिन्छ। भोलि तपाईको शरीरमा थकान र आलस्यता हावी रहन सक्ने देखिन्छ। पाचन सम्बन्धी समस्याले सताउनाले तपाईको दिन खासै उत्साह भरिपुर्ण नरहने देखिन्छ। भोलि तपाईको साथी-संगीसंगको सम्बन्द बिग्रन सक्ने हुँदा सजक रहनु होला।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) भोलि तपाई हरेक कार्य गर्दा सचेत रहनु पर्ने देखिन्छ भने भोलि तपाई सवारी देखि पनि सावधान रहनु होला। भोलिको दिनमा तपाई सकेसम्म यात्रा नगरेकैम उचित रहने देखिन्छ। परिवारका सदस्यहरूसँग सकेसम्म बहस नगर्नु होला। भोलि क्रोध साथै बोलीमा नियन्त्रण राख्नु भएमा समस्या नबढ्न सक्ला। निषेधात्मक तथा अनैतिक देखि टाढा रहनु होला।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo ) भोलि तपाई वैवाहिक जीवनमा असफल रहनु हुने देखिन्छ। परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यले तपाईलाई भोलि सताउन सक्ने देखिन्छ। साझेदार र व्यवसायीहरूसँग सहनशीलता साथ व्यवहार गर्नु पर्ने भोलिको दिन अध्ययनमा भने सफलता मिल्ने देखिन्छ। भोलि तपाई अर्थहीन छलफल वा विवादमा फस्न सक्ने हुँदा सजक रहनु होला। कानुनी कार्यबाट पनि तपाई टाढा रहेकै उचित रहने देखिन्छ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) भोलि तपाई स्फूर्ति तथा स्वस्थताको अनुभव गर्नु हुने देखिन्छ। भोलि तपाईको पारिवारिक,व्यावसायिक वातवरण आनंददायी रहने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई सहकर्मीहरूले राम्रै साथ र सहयोग दिने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि भोलिको दिनमा तपाईको सुधार आउने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई घर-जग्गा सम्बन्धी कार्यमा पनि लाभ मिल्न सक्ला।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) भोलिको दिन तपाईको लागि मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। भोलि तपाई बहस वा बौद्धिक छलफलबाट टाढा रहनु होला भने भोलि परिवारमा कलह नहोस भन्नको लागि सजक रहनु होला। प्रेम जीवन पनि तपाईको भोलि असफल रहन सक्ला। तर भोलि तपाईको नयाँ कार्य थालनीको लागि शुभ देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई आर्थिक लाभ पनि मिल्ने देखिन्छ।
बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) भोलिको दिन तपाईको शान्त चित्तका साथ व्यतित रहने देखिन्छ भने भोलि तपाई आध्यात्मिकता प्रति बढी केन्द्रित रहनु हुने देखिन्छ। भोलि तपाईको डर र चिन्ता पनि हटेर जाने देखिन्छ। विवाहित जीवन आनन्दित रहने भएता पनि भोलि आर्थिक हानिको सम्भावना देखिन्छ। तपाईको व्यवहार सामान्य रहला। साथै स्वादिष्ट भोजन समेत प्राप्त हुने देखिन्छ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius )भोलि नयाँ आर्थिक योजना सुरु गर्नको लागि एकदमै शुभ देखिन्छ भने भोलि परिवारको व्यवसायमा संलग्नता बढेर जाने देखिन्छ। भोलि परिवारका सदस्यहरूसँग यात्रा समेत व्यवस्थित हुने देखिन्छ। भाग्य वृद्धि समेत हुने भोलिको दिनमा तपाईलाई राजनीतिक लाभ पनि मिल्न सक्ला। भोलि तपाईको निर्धारित कार्यमा समेत लाभ मिल्न सक्ला। आध्यात्मिकतामा चासो बढ्नेछ।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) भोलि तपाईको परिवारमा मात्र नभई समाजमा पनि कलह बढेर जाने देखिन्छ। भोलि तपाईले आफ्नो बोलिमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि नियन्त्रण राख्नु पर्ने देखिन्छ। भोलि तपाईको मान हानी नहोस् भन्नको लागि सजक रहनु होला। भोलि तपाईलाई आँखामा सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्ला। भोलि अचल सम्पत्ति सम्बन्धी कार्यबाट टाढा रहनु होला।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) भोलिको दिनमा तपाईलाई हरेक प्रकारको लाभ मिल्ने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ला भने भोलि तपाईको कलाको क्षत्रमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। भोलि तपाईको शत्रु पराजित रहने देखिन्छ। आध्यात्मिक विचारहरूलेमा शान्तिको आभाष गराउने देखिन्छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा खुसी मिल्ने भोलिको दिन तपाईको आर्थिक रुपमा पनि सफल रहन सक्ला।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) लोभ साथै लालचका कारण भोलि तपाई लज्जित रहनु पर्ने हुँदा सजक रहनु होला। आर्थिक विषयमा सावधानी अपनाउनु पर्ने भोलिको दिन नयाँ कार्य थालनीको लागि खासै शुभ देखिन्न। पूंजीगत लगानी नगर्नु होला भने भोलि तपाईको व्यर्थ समय खर्च हुने देखिन्छ। शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहन सक्ला। भोलि तपाईको एकाग्रता कम हुनाले कार्य सिद्धिमा गार्हो पर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ३०, २०७४२०:३९
भोलिको तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल [ २०७४ चैत्र २ गते ]